Etu aga - esi zere igbu onwe gị na saịtị | Martech Zone
Ajụjụ mbụ anyị nwere mgbe onye ahịa gwara anyị na ha ga - emepe saịtị ọhụrụ bụ ma ndị isi na njikọ njikọ ga - agbanwe. Ọtụtụ oge azịza ya bụ ee… na nke ahụ bụ mgbe ntụrụndụ malitere. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ guzobere eguzobe nwere saịtị nwa oge, ịkwaga na CMS ọhụrụ na imewe nwere ike bụrụ nnukwu ihe ịga nke ọma… mana ịghara ịmegharị okporo ụzọ dị ugbu a bụ maka igbu onwe SEO.
Okporo ụzọ na-abanye na saịtị gị site na nsonaazụ ọchụchọ… mana ị duru ha gaa peeji 404. Okporo ụzọ na-abanye na saịtị gị site na njikọ ndị ekesara na mgbasa ozi mmekọrịta… mana ị duru ha gaa peeji 404. Nkọwapụta mmekọrịta gbasara URL ọ bụla kọọrọ 0 n'ihi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịka Facebook masịrị, Twitter tweets, LinkedIn na ndị ọzọ na-echekwa data dabere na URL… nke ị gbanwere. May gaghị amata mmadụ ole na-aga peeji 404 maka ọtụtụ saịtị ekwula data ahụ na nchịkọta gị.
Kasị njọ na, na-akwakọba mkpa isiokwu ikike i wuru kwa ibe site backlinks a tụfuru windo. Google nyere gi ubochi ole na ole iji dozie ya when mana mgbe ha ahughi mgbanwe obula, ha dobe gi dika poteto di oku. Ọ bụghị ihe ọjọọ niile. Nwere ike ịgbake. Ihe onyogho a bu ezigbo onye ahia anyi nke tufuru ihe kariri 50% nke ahia ahia ha niile, ngwanrọ ngwanrọ na azuma ahia ohuru. Anyị nyere ha a Atụmatụ SEO njem maka njikọ ma eleghara ya anya na mwepụta saịtị ọhụụ ka ọ kacha mkpa.
Ihe kacha mkpa ahụ gbanwere.
Companylọ ọrụ ahụ abanyela ọtụtụ puku redire n'ime sava ha. Mgbe izu ole na ole gachara, Google rịbara ama wee laghachi ha ebe ha nọ. Ọ bụ ezie na ndị otu ahụ enweghị ụjọ na ụra abalị. Omume nke akụkọ ebe a bụ na ịmepụta saịtị ọhụrụ yana usoro njikọ ọhụrụ nwere ike ịbụ atụmatụ dị egwu (ụmụ nwoke SEO ga-arụ ụka mgbe ụfọdụ na ọnwụ) n'ihi ntụgharị mgbanwe ị nwere ike ịnweta. Ma, kama, mana… ijide n'aka na 301 redirect njikọ gị niile.
Social ka ga-efunahụ ọnụ ọgụgụ mmekọrịta gị na ya. Anyị na-anwale ụfọdụ ụzọ iji gbochie nke ahụ ịme na ebe anyị debere usoro njikọ maka ọdịnaya ochie wee melite usoro ahụ maka ọdịnaya ọhụrụ. Ọ ga-atọ ụtọ!